CNAPS: Tsy maintsy misitraka “tsinjo fameno” ireo manaraka ny fenitra takiana - ewa.mg
News - CNAPS: Tsy maintsy misitraka “tsinjo fameno” ireo manaraka ny fenitra takiana
Nameno ny fiainana andavanandron’ny mpiasa. Tapitra omaly 15 oktobra 2020 tamin’ny 12 ora alina ny fisoratana anarana anatin’ny hetsika “tsinjo fameno”, entina hanampiana ireo sehatra tsy miankina izay nisy fiantraikany tamin’ireo mpiasa ny Covid-19. “Raha sandaina ara-bola ny fangatahana fisoratana anarana hisitraka ny tsinjo fameno dia 40 lavitrisa Ariary. Ny 20 lavitrisa amin’io ihany anefa no mbola nahavita antontan-taratasy ara-dalàna. Ny fisoratana anarana no tapitra fa mbola mitohy ny fikirakirana ny antontan-taratasy”, hoy ny talen’ny serasera eo anivon’ny CNAPS, Ratsimbaharison Alain. Nambarany fa tao anatin’izay fe-potoana izay dia 131.000 ireo mpiasa nisoratra anarana ka noeritreretina fa afaka misitraka ny tsinjo ny fameno, mpampiasa teo amin’ny 2000 teo no nisoratra anarana tamin’ireo mpiasa ireo. “71.000 ihany anefa no mpiasa manana antontan-taratasy feno ka afaka misitraka ny tsinjo fameno ary mbola misy 60.000 any mbola an-dalam-pikarakarana ny antontan-taratasy. Mamporisika ireo mpiasa ireo fa tsy maintsy misitraka ny tsinjo fameno izy ireo rehefa ara-dalàna ny taratasy. Ataovy manaraka fenitra izay voalaza ao anatin’ny toromarika ny antontan-taratasy karakaraina”, hoy hatrany Ratsimbaharison Alain.
Tsiahivina fa tamin’ny 25 aogositra 2020 teny amin’ny orinasa Akanjo Ambatomaro no nanombohana ny fanolorana ny tsinjo ny fameno. “ Mpiasa raikitra nanana contrat CDI, efa niasa tato amin’ny orinasa ny taona 2019, ary farafahakeliny nandoa latsakemboka telovolana in-efatra no fepetra notakiana tamin’ireo mpiasa. 1120 ny mpiasa nahafeno izay fepetra izay ary efa nahazo avokoa. Efa any am-paosin’izy ireo ny vola”, hoy Andriamanampisoa Raharivelo Stéphane, Tale misahana ny mpiasa eo anivon’ny orinasa Akanjo. Araka ny fanazavany dia 200.000 Ariary ny farany ambany tamin’ny vola nalain’ireo mpiasa ary 500.000 Ariary ny farany ambony. Folo andro teo kosa ny fe-potoana nahazoana izany. “Nisy fiantraikany, amin’ny ampahany ho anay mpiasa nisitraka sy nandray ny tsinjo fameno, satria namaha olana maro. Izaho manokana izao mananontena, manan-janaka roa, mianatra daholo. Anisany nanampy ahy tamin’ny fampidirana mpianatra ny fahazoana ny tsinjo fameno (…) Tena nameno ny fiainana andavanandronay ny fahazoana ilay tsinjo fameno”, hoy ny solontenan’ny mpiasa ao orinasa Akanjo, Hanta. Marihina fa tsy misy zana-bola ity fampindramam-bola ity. Manomboka ny volana janoary 2021 ka hatramin’ny desambra 2021 ny famerenana azy.
Cet article CNAPS: Tsy maintsy misitraka “tsinjo fameno” ireo manaraka ny fenitra takiana est apparu en premier sur déliremadagascar.
L’article CNAPS: Tsy maintsy misitraka “tsinjo fameno” ireo manaraka ny fenitra takiana a été récupéré chez Délire Madagascar.
Anisan’ny nambaran’ny Praiminisitra Ntsay Christian, tamin’ny tatitry ny asa vitan’ny governemanta, nanoloana ireo depiote tamin’ny alalan’ny “visioconference”, omaly ny tetikasa nataon’ny fitondrana. Na izany aza, nisehoana olana ihany izany.Navoitrany tamin’izany fa tokony ho hitan’ireo depiote any amin’ny toerana nahavoafidy azy ireo izany tetikasa izany. Hitan’ny vahoaka koa. Niaiky anefa ny tenany fa misy ny lesoka. “Azontsika atao ny mandrefy ny ezaka hitondrana vahaolana, hanarenana ny vokatry ny fahatarana maro teto amin’ny firenena. Manana finiavana isika hanova ny tantaran’ity firenena iombonana ity”, hoy izy.25 tapitrisa Ar isaky ny kaomininaNotanisainy tamin’izany ny asa vita ho an’ny fitsinjaram-pahefana ny fanampiana ara-bola, 210 tapitrisa Ar isan-taona ho fampandehan-draharaha eny anivon’ny faritra. Hisitraka famatsiam-bola (CIAD), 250 tapitrisa Ar ny distrika raha 500 tapitrisa Ar isan-taona kosa izany ho an’ireo manana depiote roa. Nomena fanampiana ho fampandehanan-draharaha, 25 tapitrisa Ar avy ireo kaominina raha 15 tapitrisa Ar izany teo aloha. Mbola hisy koa ny tetibola fanampiny ho an’ireo kaominina manana mponina mihoatra ny 5 000. Tohizana ny famatsiam-bola hanatanterahana fotodrafitrasa, tohanan’ny banky iraisam-pirenena ho an’ny kaominina, mitentina 30 tapitrisa Ar. Tahaka izany koa ny fandoavana ny latsakemboky ny CNaPS tsy voaloa eny amin’ny kaominina. “Manamaivana ny vesatra ho an’ny tetibolan’ny kaominina ny fandoavan’ny fanjakana ireny latsakemboka tsy voaloa ireny ary ahafahan’ny mpiasan’ny kaominina misitraka ny zony”, hoy izy.Fanakianana voka-pifidiananaAnkoatra izany, namaly ny fanakianan’ny depiote momba ny voka-pifidianana ben’ny Tanàna farany teo ny praiminisitra. Nambarany fa hohatsaraina izany mba hipetrahan’ny fifampitokisana ary hanao ezaka ny fitsarana. Na izany aza, nohitsiny fa tsy azo ekena ny voka-pifidinanana mifamadika. Ohatra, lasa voafidy tampoka ny kandidà iray mahazo vato 500 raha 5 000 ny vato azon’ny kandidà iray hafa.Tsiahivina fa niompana amin’ny teboka maromaro ny lahatenin’ny praiminisitra. Anisan’izany ny ady amin’ny covid-19, ny fitantanana, ny filaminana sy fandriampahalemana. Eo koa ny toekarena sy ny fotodrafitrasa ary ny sosialy.Synèse R.L’article Praiminisitra Ntsay Christian: “Manana finiavana isika hanova ny tantaran’ny firenena” a été récupéré chez Newsmada.
Hotanterahina ny 8 avrily izao etsy Ambohidahy ny fianianan’ireo mpikambana vaovao miisa sivy mianadahy mandrafitra ny HCC. Tokony ho fantatra amin’izany koa ny ho filoha hitarika io Andriampanjakana io.Hitarika ny fotoana ny zokiolona indrindra amin’izy ireo vao nofidina sy notendrena, amin’ny alalan-dRakotoarisoa Florent, tafaverina indray amin’ny toerany, etsy Ambohidahy, raha efa teo anivon’io HCC io taorian’ny fifanarahan’ny 31 oktobra 1991. Tahaka izany koa ny mpitsara avo, Ratovonelinjafy Razanoarisoa Bakoly, efa mpikambana tao amin’io andrimpanjakana io nialoha ny taona 2002.Rakotoarisoa misolo an-dRakotoarisoa?Mandeha ny tombantombana fa mety ho Rakotoarisoa Florent ny ho lasa filoha, handimby ny toeran-dRakotoarisoa Jean Eric, filoha am-perinasa eo anivon’ny HCC amin’izao fotoana izao. Nolanin’ny maro anisa teo anivon’ny Filankevitra ambonin’ny mpitsara (CSM) ny tenany. Anisan’ireo namolavola ny lalampanorenan’ny Repoblika fahefatra amin’izao fotoana izao koa. Andraikitra efa notanany ny toeran’ny minisitry ny Atitany fony fitondrana Tetezamita, nikarakara fifidianana maromaro. Efa ambasadaoron’i Madagasikara tany Canada.Mety ho ny iray amin’ireo natolotry ny filohaAndraikitra farany notazoniny teo ny naha filohan’ny Cour d’appel amin’ny fitsarana ao Toliara azy. Lasa izany Rakotoarisoa hosoloin-dRakotoarisoa?Na izany aza, nanendry telo ho mpikamban’ny HCC ny filoham-pirenena. Mety ho ny iray amin’izy telo mianadahy ny ho filohan’ny HCC. Matetika sy efa nahazatra ireo mpitondra nifanesy ny tahaka izany.Synèse R. L’article Fitantanana andrimpanjakana: hifidy ny ho filohany ireo mpikambana vaovaon’ny HCC a été récupéré chez Newsmada.
Fampihehana ny fivezivezen’ny olom-pirenena: hanamora ny fikarakarana taratasim-panjakana ny Ivotoro
Notanterahina, omaly, ny fanokafana ny Ivon’ny torohay « Ivotoro » na ny « Centre d’informations administratives et d’orientations », eny Nanisana. Nitokana izany ny filoha Rajoelina Andry sy ny minisitry ny Serasera sy ny kolontsaina, Andriantongarivo Lalatiana. Nivoitra tamin’ny lahateny nifandimbiasana ny fizorana amin’ny alalan’ny fanamaivanana ny fanatanterahana sy ny fikarakarana taratasy eny anivon’ny sampandraharaham-panjakana. Mazava ny toromariky ny filoha amin’ny sampandraharaham-panjakana. « Fanjakana manakaiky vahoaka, miasa ho an’ny vahoaka sy miady amin’ny kolikoly », hoy izy. Tafiditra amin’ny fanatanterahana ny veliranon’ny filoha amin’ny ady amin’ny kolikoly koa ny fametrahana ny Ivotoro. « Miteraka ny kolikoly matetika ny tsy fahalalana. Matetika, kitakita, tahotra, fivezivezena sy fandaniana vola sy fotoana ny fanatonana ny biraom-panjakana. Voatery miditra amin’ny kolikoly ny olom-pirenena hialana amin’ireo tranga ireo », hoy ihany izy.Antso an-telefaonina, laharana 640Natsidiky ny filoha fa hanova tanteraka ny fijerin’ny olom-pirenena sy ny fanaovan’ny olom-pirenena taratasy eny min’ny biraom-panjakana ny Ivotoro. Natao toerana hanoro lalana sy mpanome toromarika ary mpandray ny fitarainana momba ny kolikoly izany. Mitovy amin’ny “call center” ny tolotra eo anivon’ny Ivotoro ka afaka miantso izany avokoa ny rehetra amin’ny alalan’ny laharana 640. Misokatra mandritra ny herinandro izany.Synèse R.L’article Fampihehana ny fivezivezen’ny olom-pirenena: hanamora ny fikarakarana taratasim-panjakana ny Ivotoro a été récupéré chez Newsmada.
Afham: mivondrona ireo vehivavy manana fahasembanana
Hanatanteraka zaikabe ny fikambanan’ny vehivavy manana fahasembanana eto Madagasikara na ny Afham, izay tarihin’ny filohany, i Fela Razafinjato. Ho tonga eto Antananarivo, araka izany, ireo mpikambana rehetra avy any amin’ny faritra hanao fikaonan-doha sy hamolavola tetikasa hampandrosoana ny mpikambana. Vehivavy manodidina ny 205 no andrasana ho tonga amin’izany.Anisan’ny fikambanana vaovao natsangana farany ny any Bealanana, mbola misy fianakaviana miafina, menatra ary naneho fahavononana kosa hivoatra rehefa nidinana tany. Nisy ny fivoarana teo amin’ny fomba fijerin’ny olona ireo olona manana fahasembanana, tato ho ato. Efa misy orinasa mandray olona sembana hamokatra ao aminy…Mbola mafy ny fitsaratsaran’ny olona mahazo ny vehivavy manana fahasembanana, indrindra eo amin’ny ara-pananahana. Heverina ho enta-mavesatra, tsy miteraka…Manana olana amin’ny fahaleovantena manokana ihany koa ny olona manana fahasembanana, indrindra amin’ny fivezivezena satria tsy mifanaraka amin’ny fahasembanan’izy ireo ny toerana misy, indrindra ireo ampiasain’ny sarambabem-bahoaka. Olana koa ny fanilikilihana izay ilana fanentanana be amin’ny fanovana toe-tsaina. Hisy ny lalao sy fifaninanana iraisana, mandritra ny fihaonan’ny vehivavy sembana ary hizarana loka ireo mendrika.Tatiana AL’article Afham: mivondrona ireo vehivavy manana fahasembanana a été récupéré chez Newsmada.
Hopitaly Manara-penitra : Nohanin-dry Mapar sy ny TGV ny vola
Famitahana sy fanodinkodinana saim-bahoaka fotsiny ihany ny fananganana sy famoronana ireo hopitaly manara-penitra, manerana ny renivohi-paritany sy distrika sasantsasany. Raha nilokaloka mantsy ny filohan’ny Tetezamita, Andry Rajoelina, fa atao manara-penitra avokoa ny fitsaboana amin’ny fanomezana ny vahoaka ny hopitaly Manara-penitra. Revo ary babo tamin’izany ny olona, saingy fitaka be vava ilay izy nony taty aoriana. Narisarisa, ary nisy mihitsy aza ireo mpiasam-panjakana mitantan-draharaha eny anivon’ny hopitaly no tsy mety sy nandà ny hiasa amin’ireo hopitaly manara-penitra natsangan-dRajoelina tamin’ny fitondrana Tetezamita. Tsotra ihany ny antony, tsy misy fitaovana ao anatin’ireo hopitaly manara-penitra. Raha ny marimarina kokoa, hopitaly foana tsy misy na inona na inona izy ireny. Tsapa ankehitriny fa natao hambaboana ny fon’ny vahoaka fotsiny ihany, ary nentina hanamarinana fa niasa i Andry Rajoelina, ary nahavaha ny olan’ny mponina, indrindra teo amin’ny lafin’ny fahasalamana. Voaporofo izao fa lanin’i Andry Rajoelina sy ny Mapar ary ny TGV ny vola tokony ho nampandehanana sy namitana tanteraka ny hopitaly manara-penitra tamin’ny fotoan’andro nanolorana azy ho an’ny vahoaka. Nisy mihitsy aza tamin’ireny fotoana ireny, fiara voatokana mpitatitra marary (ambulance), izay an’ny hopitalin’i Manjakandriana no nalaina an-keriny nentina nitokanana ny hopitaly Manara-penitra tao Toamasina, satria dia vatan-trano fotsiny ihany ilay tany an-toerana tamin’ ny fotoana nanolorana azy, fa tsy nisy na dia fitaovana iray aza naseho ny vahoaka, sns. Noho izany, tsy misy afa-tsy lainga hafafy sy fampanantenana poakaty ny an’i Andry Rajoelina sy ny mpiara-dia azy. Izany ve no mbola hitantana ny firenena? Ny gaboraraka nanjaka, ny tsy fandriam-pahalemana noho ny fiparitahan’ny basy, izay mbola misy karohina hatramin’izao, ny sosialim-bahoaka, sns. Ankehitriny, te hiverina eo amin’ny fitondrana, ingahy Andry Rajoelina sy ny forongony, saingy diso kajy satria tsy tafapetraka ary tsy nahazo izany Fitondrana izany, tao anatin’ny fifidianana fihodinana voalohany, na “1er Tour”. Izany indrindra no hanaovan’izy ireo tsipaky ny miala aina amin’ny filàna vaniny sy fanaovana antsojay ireo izay miara-dia sy manohana an’i Marc Ravalomanana, izay mpifanandrina amin’i Andry Rajoelina amin’ny fihodinana faharoa, ny 19 desambra izao. Hita ary tsapa fa tahotra no hanaovana antsojay ireo mpanohana an’i Marc Ravalomanana. Eo ihany koa ny filàm-baniny amin’ny fomba rehetra, satria manana fahefana amin’ny alalan’ny praiminisitra Ntsay Christian, ka hanaovana “ramatahora” ireo olona mpanohana ny kandidà laharana faha-25 mba hentina handemena tsotra izany an’i Marc Ravalomanana… Politika maloto ny an-dry Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga sy ny firongony. MN L’article Hopitaly Manara-penitra : Nohanin-dry Mapar sy ny TGV ny vola est apparu en premier sur .L’article Hopitaly Manara-penitra : Nohanin-dry Mapar sy ny TGV ny vola a été récupéré chez Triatra.
Ho fampiharana ny miralenta. Mitondra tolo-kevitra mankany any amin’ireo fahefana mpanapa-kevitra ny CNFM (Conseil National des Femmes de Madagascar) mba hitsinjovana ny vehivavy indrindra aorian’izao krizy ara-pahasalamana izao. “Miangavy ny governemanta izahay mba hanokana vola misimisy kokoa amin’ny sehatry ny fampianarana,ny fahasalamana sy ny fanajarian-tsakafo mba hiatrehana ireo olana mianjady amin’ny vehivavy nateraky ny Covid-19; indrindra koa mba hampiakarana ny tetibola ho an’ny ministera miandraikitra ny vehivavy sy ny fampiroboroboana ny zony”, hoy ny filohan’ny CNFM, Andriamasy Estelle nandritra ny valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety ny 09 oktobra 2020 tetsy Antaninarenina. Ao anatin’ny soso-kevitra aroson’ity fikambanam-behivavy ity ihany koa ny tokony hanamorana ny fahazoan’ny vehivavy misitraka famatsiam-bola ny tetikasa ho fanarenana ny fari-piainan’izy ireo aorian’izao krizy izao. Raha eo amin’ny lafiny fiakaran’ny herisetra mahazo ny vehivavy dia “mangataka izahay mba hampitomboana ireo ivon-toerana fihainoana mandray ireo vehivavy iharan’ny herisetra ary ho atao maimaim-poana ny resaka fitoriana sy ny fangatahan’izy ireo taratasy fanamarinana ara-pahasalamana sy ny fitsaboana azy aorian’ny herisetra”. Eo amin’ny lafiny fandrindram-piterahana kosa dia “mangataka izahay any amin’ireo faritra latsaka ambany ny tahan’ny fandrindram-piterahana toa an’ny faritra Androy, Anosy, Bongolava ary Atsimo Atsinanana mba hisy ny ezaka manokana hampiakarana izany satria ny fahamaroan’ny zaza teraka dia miteraka fahafatesan’ny vehivavy eo am-piterahana”. Ankoatra izany, miantso ny fitondram-panjakana ny CNFM hanendry vehivavy ho governoran’ny faritra ho amin’ireo faritra dimy sisa tsy voatendry: Amorin’i Mania, Betsiboka, Bongolava, Ihorombe ary Melaky. Nirina R. Cet article CNFM: “Hampiaro ny miralenta eo amin’ny fitantanana ny firenena” est apparu en premier sur déliremadagascar.L’article CNFM: “Hampiaro ny miralenta eo amin’ny fitantanana ny firenena” a été récupéré chez Délire Madagascar.
Fanondranana an-tsokosoko harem-pirenena: mitaky ny marina momba ilay vato 8 kaontenera ny KMF/Cnoe
Mba tsy ho very an-javony sy ho tahaka ilay volamena atsy Afrika Atsimo. Naneho ny ahiahiny ary nitaky ny marina sy ny tohin’ilay raharaha nahasaronana vato valo kaonterana tao Toamasina ny eo anivon’ny KMF/Cnoe.Nahitsy ny filohan’ny KMF/Cnoe, Andriamalazaray Andoniaina, omaly, raha naneho ny heviny momba ny fanondranana an-tsokosoko ny harem-pirenena. “Aoka tsy ho toy ilay volamena 73,5kg atsy Afrika Atsimo indray koa ity raharaha ity. Tsy tokony ho afa-bela ireo tompon’antoka rehetra ao ambadik’io”, hoy izy. Na izany aza, nanteriny fa matoky tanteraka ny fitsarana ity fiarahamonim-pirenena ity amin’ny hanaovany ny asany momba izany.Afa-maina hatrany ireo trondro vaventyNametraka ny ahiahiny ihany anefa ny KMF/Cnoe raha nilaza fa tratra farany hatrany ireo tsy mba afaka miaro ny tenany tafiditra amin’ny raharaha tahaka izao raha ny tranga matetika miseho eto amin’ny firenena. “Afaka miaro tena kosa anefa ireo trondro vaventy ary vitavita ho azy tsy misy tohiny izany. Tsy tokony hiseho intsony ny mizana tsindrin’ila”, hoy ihany izy. Nanteriny fa zava-doza raha robaina tahaka izao ny harem-pirenena. Efa eny amin’ny seranan-tsambo vao saron’ny fadin-tseranana izany raha nokasaina haondrana any Sina. Tsy tokony hisy afa-maina ireo voasaringotra amin’izany. Eo ireo teratany vahiny tompon’entana sy ireo mpandraharaha malagasy, araka ny nambarany. Eo koa ny lalana nizoran’izany vato amin’ny kaontenera izany. “Avy aiza ny tena niandohany ? Aiza ny andraikitry ny biraon’ny kadasitry ny harena an-kibon’ny tany sy ny fanomezan-dalana hitrandraka…”, hoy ny fanontaniany.Vato sarobidy…Tsiahivina fa saron’ny ladoany, ny volana jolay teo, tao Toamasina ireto vato nokasaina haondrana ireto. Tsy araka ny fanambarana fanondranana entana ho vato indostrialy ny hita tamin’izany. Niharihary ny marina rehefa nosavaina fa nahitana vato sarobidy, toy ny “Ametiste” sy safira tamin’ireo kaontenera. Teo koa ny fanaovana hosoka sy fanambarana diso. Manampy izany ny famonoana ny fitaovana fitiliana “scanner” mba hahafahan’ny entana miditra ny faritry ny seranan-tsambo. Araka izany, manaraka akaiky ny momba ity raharaha vato sarobidy nokasaina haondrana ity izany ny KMF/Cnoe. Andrasana ny tohin’ny raharaha eny anivon’ny Pac.Synèse R.L’article Fanondranana an-tsokosoko harem-pirenena: mitaky ny marina momba ilay vato 8 kaontenera ny KMF/Cnoe a été récupéré chez Newsmada.
Tahina Carine – Trass Tsiadana Nandritra ny “Caravane Rajery” farany teo no tena nahitana ny talentan’ity mpanakanto ity… Nialoha izany, efa heno namerina ireo hira arahin-gitara vitsivitsy i Tahina Carine, satria mitendry ihany koa izy. Manohy ny lalany ary eo an-dalana mampahafantatra ny sanganasany izy amin’izao fotoana izao. Fotoana iray hahitana azy an-tsehatra ny anio alina, manomboka amin’ny 8 ora, etsy amin’ny Trass Tsiadana. Hifampizara sehatra aminy mandritra izany i Jaquis Randria, mpanakanto tanora manan-kozaraina ihany koa.Iary’s Band – Piment Café Elaela tsy heno sy tsy hita an-tsehatra. Fa mbola manao mozika ary milomano tanteraka ao ihany Iary. Ho famaliana ny hetahetan’ireo mpankafy azy, hiaka-tsehatra etsy amin’ny Piment Café Behoririka ny Iary’s Band, anio manomboka amin’ny 8 ora alina. Tsy mivaona amin’ny gadona rock nahafantarana azy, saingy miampy ilay fahamatorana izay efa tazana nasehon’ny tarika nandritra ny taona maromaro izay.Tarika Mala –Trass Tsiadana Anjaran’ny “Nahandro gasy” kosa indray no miaka-tsehatra ao amin’ny Trass Tsiadana, ny asabotsy 25 septambra izao. Hizara ny vazo vokatry ny tany ny tarika Mala, ampian’i Mbola Talenta sy i Liks Joss, vahiny nasaina manokana. Ho heno an-tsehatra indray ireo hira mifona hatsikana mampalaza an’i Beauzaka de Mala, toy ny “Akama bonne”, “Rakakabe”, “Tsenan’Ambohitoaka”, “Double robinet”, sns.Nangonin’i Zo ny AinaL’article Taratry ny kanto a été récupéré chez Newsmada.